टिप्पणी : गोयल भ्रमणका अनुत्तरित प्रश्नहरु « Tulsipur Khabar
८ घण्टाका लागि आएका भनिएका गोयल बिहीबार बिहानमात्रै फर्किए । तर, उनले कसलाई भेटे, के मिसनमा आएका थिए भन्ने सूचना अझै गोप्य नै थियो । संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा उनको भ्रमणलाई लिएर व्यापक प्रश्न उठे । उनी फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले एउटा नोट जारी गरेर गोयलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेको सार्वजनिक गरे । त्यसले यो भ्रमणलाई झन् चर्चामा ल्यायो । भ्रमणको उद्देश्यदेखि प्रोटोकलसम्मका प्रश्न उठे ।
यो भ्रमणलाई लिएर सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि आइतबार कात्तिक ९ गते बेलुका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले फेसबुकमा एउटा लामो स्टाटस लेखेर गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको दर्जा दिए, जुन कुरा यसअघि सरकारका कुनै पनि निकाय र अधिकारीले बताएका थिएनन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको यो भनाइपछि फेरि चर्चा सुरु भएको छ– के साँच्चिकै गोयल विशेष दूतका रुपमा आएका थिए ? यदि थिए भने यो कुरा भारत र नेपालका सरकारी संयन्त्रले किन पहिले बताएनन् ? किन भारतीय दूतावासले गोयल काठमाडौं आएको नै अस्वीकार ग¥यो ? किन परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट ग¥यो ? किन उनको भ्रमणको सूचना र भेटघाटका सूचना गोप्य राखिए ? किन विपक्षी दलका सांसदले उनको भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेटमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा थ्रेट’ महसुस गरे ।
किन परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका सत्तारुढ दलकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र गोयलको भेटलाई कुटनीतिक मर्यादाविपरित भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ? यसका साथै सीमा र नक्साको विषयमा कुरा गर्न राजनीतिक वा कुटनीतिक तहमा नभएर प्रधानमन्त्रीले रअका प्रमुखसँग वार्ता गर्न किन प¥यो भनेर उठेका सवालको पनि जवाफ कुनै पक्षले दिएका छैनन् ।
अनि, यो भ्रमणबारे उठेका प्रश्नहरु उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेजस्तै प्रायोजित कुप्रचार नै हुन् त ? हुन् भने यसको प्रायोजन कसले गरिरहेको छ ? नेपाल र भारतको सरकारी तहबाट भ्रमणलाई गोप्य राखिएपछि यो रहस्यमय शैलीको हुने भइ नै हाल्यो । त्यसमाथि भ्रमणबारे जसरी किस्ता–किस्तामा सूचनाहरु चुहाइएको छ त्यसले भ्रमणलाई थप रहस्यमयी बनाउने काम गरेको छ ।
आइतबार जसरी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आलोचना र प्रश्नहरुलाई नै कुप्रचार भन्दै वास्तविकतामा उनी प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत भएको बताए यदि उनी त्यही हैसियतमा आएका हुन् र सीमा सम्बन्धि विषयमा मात्रै छलफल गरेका हुन् भने यसलाई गोप्य राख्नु नै राख्नु पर्ने थियो त ? सीमासम्बन्धि छलफलकै विषयलाई लिएर नेकपाभित्र एउटा पक्षले अकुटनीतिक देख्ने र अर्को पक्षले प्रायोजित कुप्रचार देख्ने भएको हो त ?
गोयल कात्तिक ५ गते काठमाडौमा उत्रिएका थिए । गोयल नेपालमा आएको पुष्टि गर्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जानकारी नभएको बतायो । अर्कोतर्फ काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासका पदाधिकारीले त गोयल नेपालमै नआएको दावी गरेको थियो । जबकि, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले परराष्ट्रका प्रतिनिधिसहित भेट गरिएको बताएका छन् ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले ओली र गोयलबीचमा दुई मुलुकबीच रहेका तमाम समस्याहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा कुटनीतिक वार्ता तथा छलफल गरी समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको दावी गरेका थिए । गोयल मोदीको विशेष दूतका रुपमा आएको उनले बताएका थिएनन् ।
पोखरेलले ‘प्रधानमन्त्रीसँग रअका प्रमुखको भेट ः प्रायोजित कुप्रचार र वास्तविकता’ का बारेमा लेखेका छन् । उनको ६ बुँदे टिप्पणीको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित भेट तथा संवादका लागि आए र फर्किए ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘प्रोटोकललाई ख्याल नगरिएको, मर्यादाको पालना नगरिएको, छिमेकी मुलुकको जासूसी संस्थाको योजनामा संचालित हुन खोजेको, वार्ताका विषयहरूलाई रहस्यमा राखिएको, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याइएको आदि भनेर आरोप लगाउने कोसिस भइरहेको छ । अर्थात्, यी सबै कुरा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार विरूद्धमा एउटा गलतखालको बहस सिर्जना गर्न खोजिदैछ । दुर्भाग्य कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताहरू समेत यस अभियानमा संलग्न हुन खोजेका देखिदैछन् ।’